wararka maanta-arlaadii.net » Dagaalo ka dhacay Goofgaguud iyo Alshabaab oo la wareegay Deegaankaas
Wararka ka imaanaya Deeganka Goofgaduud oo 30 kiilo mitir u jirta Magalada baydhabo ee Gobolka baay ayaa sheegayain Ciidama ka tirsan Alshabaab ay saajay weeraro culus kusooqaadeen Fariisamo Ciidam katirsan Maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen deeganka Goof gaduud.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in Ciidamada alshabaab ay magalada Baydhabo kasoo weeraren Dhowr Goobod sida Deeganka Goof Gaduud iyo deeganka maya fuulka oo ah halka laga soo galo Magalada baydhabo .
War ay baahiyeen Xarakada Alshabaab ayaa sheegaya in Dagaal xoogeen ka dib Ciidanada alshabaan ay la wareegeen Deeganka Goof gaduud iyagoo sidoo kale sheegay in Ay haljaasi ku dileen ciidamo tira vadan kuwaaso Gaaraya 21 askari Halka 14 kalane ay dhawcaceen kuwaasoka tirsana ciidanada Maaamulja Koonfur Galbeed Ee soomaliya.
Hasa yeesha Wasiirka Amniga Dawlada Goboledka Koonfur Galbeed Soonalita Xasan Maxamed Xasan Eelaay Ayaa isna Warbaahinta Gudaha u sheegau In as
Ysan jirin Wax lagala wareegay Ciidanadooda Balse ay jiraan Dagaal xoogan oo tan iyo saaka ka socda Deganka Goof gaduud oo 30 kmu jira Baydhabo
Wasiir xasan Eelaay ayaa intaa ku daray in uujiro qasaro soo kaala gaaray labada dhinaca balse Imanka aysan cadeen karin Intuu la egyahay
Deegankana uuwali ka docda dagaal .
Sikastaba Dadka deeganka ayaa warbashinta Arlaadii u sheegay in xoogaga Alshaababay la wareegeen Deeganka Goof gaduud kadib dagaal qaraat oo muda socday kadoo ka dhacay saakay Deeganka Goofgaduud ee gobolka Bay